धरानमा कांग्रेसको अग्रता, तोडिएला लालकिल्ला ? – Makalukhabar.com
प्रेस संगठनको दोश्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ युवाको घटनास्थलमै मृत्यु
गगनको अपील- ‘संविधान रक्षाको पक्षमा जुटौँ-उठौँ’
युभेन्टसले जित्यो इटालियन सुपरकपको उपाधि
धरानमा कांग्रेसको अग्रता, तोडिएला लालकिल्ला ?
मकालु खबर	 २०७६ मंसिर १६ ०८:१५ प्रकाशित 57 0
मंसिर १६, धरान । कम्युनिस्टहरुको लालकिल्ला धरान यसपटक धर्मराएको छ । २०४६ साल यताका हरेक निर्वाचनमा जीत हासिल गर्दै आएका कम्युनिस्टहरु पहिलो पटक धरानमा कमजोर भएका छन् । मंसिर १४ गतेको स्थानीय तह अन्र्तगत धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्ने लक्षण देखिएको छ ।
धरानका अधिकांश कम्युनिस्ट बाहुल्यता भएका वडाको मत गनिसक्दा सत्तारुढ नेकपा १६२७ मतले कांग्रेस भन्दा पछाडी छ । धरानको ताजा मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसका तिलक राईले २१३११ मत प्राप्त गर्दा नेकपाका प्रकाश राईले २०००८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
दुई दिन देखि जारी मत गणनामा सुरुका केहि गणनामा प्रकाश राईले अग्रता हासिल गरेपनि त्यसपछि तिलक राईको भोट बढ्दै गएको छ । आज विहान आइपुग्दा १३ सयको मतान्तर देखिएपनि धरानमा कांग्रेसले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्ने अनुमान गर्न थालि सकिएको छ ।
अहिले वडा नं. ४ र ६ को गणना भइरहेको हाम्रा संवाददाता भरतराज शर्मा (गोपाल)ले जानकारी दिएका छन् । अब गन्न बाँकी रहेका वडा १, २, ३, ५ र ७ हुन । धरानको वडा नं.१, २, ३, ५ र ७ नेपाली कांग्रेसको पकड क्षेत्र हो । यहाँको अधिकांश भोट नेपाली कांग्रेसलाई गएको छ । विगतका मतपरिणाम हेर्दा यहाँ नेकपाको अवस्था कमजोर छ । धरानको यो क्षेत्र माडवारी समुदाय र नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो । त्यहि भएर यसपटक धरानमा नेपाली कांग्रेसले लालकिल्ला तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेस पछि धरानमा संघिय लोकतान्कि लिम्बुवान मञ्च रहेको छ । मञ्चका अमर इजमले १००८ मत पाएका छन् । उपेन्द्र÷डा.बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी चौथो नम्बरमा छ । समाजवादीका गजेन्द्र इस्वोले ६५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
धरानमा आज बेलुकासम्म निर्वाचनको परिणाम आउने बताइएको छ ।
अन्ततः सिद्धबाबा भनिने कृष्णदासलाई एम्बुलेन्समै हालेर लग्यो प्रहरीले, रुँदै महिलासँग भने मलाई माफ गरिदेऊ (भिडियोसहित)
बाग्लुङमा बाम गठबन्धनका खिमविक्रम शाही विजयी
यात्रु बस पल्टिँदा दुई जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते
फुलह्यामलाई हराउँदै म्यानचेष्टर युनाईटेड शीर्ष स्थानमा
‘कोरोना सँगसँगै ओली भाइरसविरुद्ध पनि लड्नु छ’